Mabhuku aPererez-Reverte, chiitiko chakazara-chenhoroondo yekushanya | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku aArturo Pérez-Reverte
Vashandisi veInternet pavanopinda "Arturo Pérez-Reverte Libros" muinjini yavo yekutsvaga, mhedzisiro inowanzoitika ine chekuita nesaga rakabudirira iro rakashandura munyori kuita mutengesi mukuru: Captain Alatriste. Iyo yekutanga novel mune ino akateedzana yakanyorwa pamwe nemunyori nemwanasikana wake Carlota Perez-Reverte. Pamusoro pekubudirira kweichi chikamu chekutanga, munyori akasarudza kuenderera - ega - nemitambo yemunhu akashinga.
Vazhinji brand Perez-Reverte vasingaremekedze, uye kunyange kuzvitutumadza. Izvi, kunyanya, nekuda kwemamwe makakatanwa akaunzwa kuburikidza nehukama hwemagariro. Chero zvazvingaitika, basa rakakura semutori wenhau, pamwe nepeni yake yakanaka zvinoratidza zvimwe. Kwete pasina, Pérez-Reverte mumwe wevaporofesa veRoyal Spanish Academy.
1 Muchidimbu nhoroondo yemufananidzo
2 Mabhuku naArturo Pérez-Reverte
2.1 Iyo Flanders Tafura (1990)
2.2 Bhiriji reAassassins (2011)
2.4 Mutsara weMoto (2020)
Muchidimbu nhoroondo yemufananidzo
Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez akaberekerwa muguta reSpain reCagagena, munaNovember 25, 1951. Zvidzidzo zvake zvepamusoro zvakaitwa kuComplutense University yeMadrid, kwaakawana degree reJenali. Akaita basa iri kwemakore makumi maviri nemaviri akateedzana (21-1973) muterevhizheni, nhepfenyuro nepepanhau, maakafukidza matambudziko epasi rose
Akatanga kuita semunyori pakati pe80s nebhuku rake Hussar (1986). Kunyange zvakadaro, akazozivikanwa nemabasa ake. Tafura yeFlanders (1990) uye Iyo kirabhu yeDumas (1993). Aya mabasa aingova mavambo ekubudirira kwaive mberi. Basa rake rakasimudzira zvakanyanya mukudhinda nhoroondo yenhoroondo Captain Alatriste (1996). Uku kwaive kugamuchirwa kweruzhinji, zvekuti yakaguma yave saga yemabhuku manomwe nemamiriyoni emakopi akatengeswa pasirese.
Kubva 1994, Pérez-Reverte anga akazvipira pakunyora chete, achizviti ndeemunyori anodarika makumi mana enoveli. Pamusoro pe, yakawana kuzivikanwa kwenyika uye kwepasi rose, zvese nekuda kwemabasa ake uye zvinyorwa zvakashandurwa kubva kwavari zvema cinema, senge:
Goya Mubairo 1992 weakanakisa screenplay akashandurwa na Fenzi tenzi
1994 Palle Rosenkranz Prize, yakapihwa neDanish Academy yeCriminology kunoverengeka Iyo kirabhu yeDumas
Dhuru Mubairo 2014 weBlack Novel ye Kukomba
Liber Mubairo 2015 kune Akanyanya Kubudirira Hispano-American Munyori
Mabhuku naArturo Pérez-Reverte
Tafura yeFlanders (1990)
Iri ibasa rechitatu rakaburitswa nemunyori, nhoroondo uye mutikitivha inozara nezvakavanzika uye yakaiswa muguta reMadrid. Munguva pfupi, iri basa naPérez-Reverte rakakwanisa kutengesa makopi anopfuura zviuru makumi matatu rakashandurwa mumitauro yakati wandei, ichipa kuti rive nyore kusvika kune dzimwe nyika. Iyo yakagadziridzwawo kuita firimu muna 1994 nekambani yekugadzira yeChirungu uye inotungamirwa naJim McBride.
Iyo novel inoratidzira enigma yakavharirwa mune yakajairwa pendi Chemhondoro Tafura yeFlanders - nemupendi Pieter Van Huys (XNUMXth century) - uye mune iyo mutambo wechess unobatwa pakati pevarume vaviri vanoonekwa nemhandara. Pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri, Julia, mudiki wezvekudzorera hunyanzvi, anotumwa kuti ashande pabasa reshandesi. Sezvaanonyora nezve pendi, anoona chinyorwa chakavanzwa chinoti: “QUIS INECAVIT EQUITEM " (Ndiani akauraya knight?).
Akashamiswa nezvaakawana, Julia anokumbira mvumo kubva kuna Menchu ​​Roch - shamwari uye muridzi wegalari - uye muridzi wependi, Manuel Belmonte, kuti aongorore chakavanzika ichi, icho chinogona kuwedzera kukosha kukuru kubasa. Ikoko kuferefeta kunotanga kugadzirisa chirahwe chakaoma kudaro, pamwe nemutengesi wekare Cesar uye nyanzvi chess mutambi anonzi Munoz sevanopa mazano.
Nekufamba kwega kwega kwezvidimbu zviri mubhodhi, zvakavanzika zvakazara neshungu neropa zvichafukurwa, inozopedzisira iine hunhu hwese.
Iyo Flanders Tafura (Yakanakisa ...
Bhiriji revaurayi (2011)
Iri basa chikamu chechinomwe chesaga inozivikanwa Captain Alatriste. Iyo inoitika-yakazara nhaurwa nezve adventures emunondo Diego Alatriste naTenorio kuburikidza nemaguta makuru eItari seRoma, Venice, Naples neMilan. Nenyaya iyi, Arturo Perez-Reverte anopedzisa kuunganidzwa kweuyu anozivikanwa mushanyi izvo zvakamupa kuzivikanwa kwakanyanya padanho rekunyora.
Bhiriji revaurayi Iyo yakavakirwa pachinangwa chitsva chaGeorge Alatriste, panguva ino muVenice, kwaanoperekedzwa naÍñigo Balboa, shamwari yake isingaparadzanisike uye protégé. Kuburikidza naFrancisco de Quevedo, protagonist inosarudzwa kuuraya Doge yazvino apo mhemberero yeKisimusi iri kuenderera mberi.
Chinangwa chikuru chekutsakatika ndechekupa hurumende nyowani yakabatana nehumambo hweSpain. Rinenge risiri basa riri nyore, kana kuna Diego kana kune vamwe vake: maCopon, Balboa uye vaMoor Gurriato, vanozotora chinetso ichi, kunyangwe vachizviona sevasingakwanise.
Bhiriji revaurayi ...
Uyu nhoroondo yenhau izere nekuita uye zvakavanzika Iko kuvhara kweiyo Falcó trilogy. Iyo yakagadzika muSpain yemakumi matatu, yakashatiswa neHondo Yenyika. Kufanana nevekare, zano racho rizere nekusazivikanwa, kutengesa, mhosva, kurara nemhuka, kushinga, vanobatwa uye nerima.
Mumutambo mutsva uyu Lorenzo Falcó anotarisana nemamishini maviri akapihwa neAdmiral wehungwaru hwaFranco, uye kuti uzviite unofanira kuenda kuFrance. Kutanga, hunhu hukuru huchave nechinangwa chekudzivirira pendi kubva Guernica —Nemupendi Pablo Picasso— akapihwa kumusangano wakakurumbira wePassage.
Sechinangwa chechipiri, Falcó anofanirwa kuzvidza mudzidzi ari kuruboshwe. Iyi zano ichatiratidza nerutivi rwakasviba rweFalcó, uyo anofanirwa kutarisana nenjodzi dzisingaverengeke munzvimbo izere nehunyengeri.
Mutsara wemoto (2020)
Iri ibhuku rekupedzisira rakaburitswa nemunyori Pérez-Reverte. Iyo inhoroondo yenhoroondo mukuremekedza vese avo vakarwa muSpanish Civil War. Iyi nyaya isinganzwisisike - kunyangwe iine vanhu vekunyepedzera - inorondedzera chokwadi chakararama nevagari venyika dzeCervantes munguva yakaoma iyoyo.
Pérez-Reverte anopa hunyanzvi musanganiswa wenhema neichoicho, uko kwakanyorwa zvakanaka maakaundi ako pachako kunopa simba rakakura kuchikamu. Mhedzisiro mhedzisiro mutero mumwenje netsamba kune vese avo vane chekuita nekukakavara kwakadai.
Mutambo uyu unotarisa muna Chikunguru 24 na25, 1938, panotanga hondo yeEbro. Basa iri rinotsanangura kufora kwevanopfuura varume mazana maviri nemazana masere nemakumi mana evakadzi veXI Mixed Brigade yeHondo yeRepublic, avo vanofambira mberi kusvikira vayambuka rwizi nekugara muCastellets del Segre. Ipapo ndipo panotanga kukonana kwakakomba kwakatora mazuva gumi uye kwakakonzera zviuru zvekurasikirwa.
Mutsara wemoto ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku aArturo Pérez-Reverte
Esteban Navarro. Kubvunzana nemunyori weruzivo